Qodobbada Heshiiska Soomaaliya Iyo Kenya, Akhriso Sooyaal-ka – Goobjoog News
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta kula kulmay xarunta madaxtooyada Kenya, iyaga oo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo iskaashi dhex-mara labada dhinac.
Madaxaweyne Maxamed Cabdullahi waxaa loo soo dhaweeyay si heer sare ah, waxaa la siiyay salaan sharaf, waxaa la tumay salaanta calanka labada dal, waxaa la riday 21 madfac oo lagu soo dhaweynayo, intaa waxaa dheeraa madaxweynaha Kenya ka sokow waxaa goobta joogay oo Rais Farmaajo soo dhaweeyay Madaxweyne ku-xigeenka Kenya Ruto, wasiirka arrimaha dibadda Amina Maxamed, , Joseph Nkaissery, Raychelle Omamo, James Macharia, Cleopa Mailu, Willy Bett, Mwangi Kiunjuri iyo Dan Kazungu
Shir Jaraa’id oo labada madaxweyne qabteen kulanka kadib, waxaa ay sheegeen sida labada dal muhiim ugu tahay in ay iska kaashaadaan arrimo badan oo ay ku jirto danta labada dal.
“Soomaaliya haddii ay hor-umarto Kenyana waa ay hor u mareysaa, Soomaaliya haddii ay nabad noqoto, Kenyana waa noqon, sidaa waxaa sheegay madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa uu codsaday in caqabada laga hor wareejiyo ganacasiga labada dhinac si loo gaaro hor-umar dhaqaale.
Dhankiisa Madaxweynaha Kenya waxaa uu carabka ku dhuftay in loo baahan yahay kalsooni dhex marta labada dal.
“Cid keligeed istaagi karta ma jirto, waa in aan wada kacno ama cid kasta ay keligii gooni u dhibtoodo, ” sidaa waxaa shirka jaraa’id ka sheegay Kenyatta isaga oo inta araaciyay in hor u mar iyo nabadgalyo laga gaarayo haddii labada dal ay is taageeraan.
Kenyatta waxaa uu sidoo kale ballan-qaaday in dalkiisa uu sii wadi doono la dagaalanka kooxaha dowladda ka soo horjeeda iyo in labada dal dhinacyo badan iska kaashadaan.
َQodobbasa Heshiiska Waxaa Ka Mid Ahaa:
In Duulimaadka lagu baarayo Wajeer la joojiyo, oo diyaaradaha Muqdisho ka baxa ay toos u tagaan Nairobi. labo todobaad gudahood.
Heshiiska Kenya Iyo Soomaaliya September 2016:
September 4, 2016-kii, labada madaxweyne Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta waxaa ay saxiixeen heshiis ay labada dal horay u galeen February 2016-ka. kaas oo saxiixa labada mas’uul ka dib la sheegay in uu shaqeyn doono, 7 bil kadib shirkaas, maanta ayaa lagu celiyay wixii maalintaas la sheegaty.
Sooyaalka Heshiisyada Soomaaliya iyo Kenya:
Heshiiskan waxaa uu bilowday July 2015kii, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo dhiggiisa Kenya Amina Mohamed ayaa February 1, 2016-kii waxaa ay Adis Ababa ku saxiixeen heshiis loogu magacdaray Joint Commission of Cooperation (JCC) kaas oo dhigaya xiriir toos ah labada dhinac ah oo ku saabsan Dhaqaalaha, Maalgeshiga iyo Nabad-galyada.
Isla sanadkaasi bisha September 2016-kii, shir IGAD isugu timid Muqdisho, waxaa mar kale gooni u baxay Kenya iyo Soomaaliya, maalintaas waxaa la cosbooneysiiyay heshiiskii iyo Joint Commission of Cooperation (JCC) .
Heshiiskii September 2016-kii:
In la fududeeyo Fiiasayaasha labada dal.
In Duulimaadyo toos ah loo sameeyo Muqdisho iyo Nairobi oo Wajer meesha laga saaro.
Arrinta qaadka ayaa aheyd mid cusub, taas oo aan la dhihi Karin waxaa ay ku jirtaa ama qeyb ka aheyd heshiiskii February.
Sida aad ka aragteen heshiiska labada dalka ma aha mid cusub, February 2016-kii waxaa la sheegay in la fulinayo, September isla sanadkaas waxaa la sheegay in labo bil gudahooda uu shaqeyn doono.
Heshiikan waxaa uu jiraa labo sano ugu yaraan, weli ma dhaqan-gelin, waxaana la isweydiinayaa sababta keeni karta in ay labada dal arrinkaas daacad ka noqdaan oo la fuliyo?